VKD3D-Proton 2.4: kunze nekuvandudza mashandiro | Linux Vakapindwa muropa
VXD3D-Proton 2.4 yave kuwanikwa nekumwe kuita kwekuvandudza kwe direct3D 12 graphical API rairo yekushandura kuVulkan. Sezvaunoziva, chidimbu chakakosha chevazhinji Windows vhidhiyo mitambo yekushanda paLinux. Pasina iyo, Proton kubva kuValve's Steam Play mutengi haizove yakafanana.
Mukuwedzera kune kuvandudza mashandiro VXD3D-Proton 2.4 inosanganisirawo zvimwe zvinhu zvitsva uye zvigadziriso zvebug kubva muzvinyorwa zvekare. Maitirwo ekuvandudza mashandiro anosanganisira kudzikisira latency muketani yekutsinhana kweprojekiti iyi, kuvandudzwa kwemutengo wemafuremu, kugadzirisa mukutsvaga kwemafomati ruzivo, uye mhinduro dzekugadzirisa kuunganidzwa kwemapayipi mune mamwe mamiriro.
Kumwe kumwe kuita kwakakosha kwekuvandudza kwakaonekwa zvakare kune zvine chekuita neiyo Kushandiswa kweGPU nekutenda kunyorwazve kwemaitiro ekugadziriswa kwemifananidzo kune akara uye kudzika template zvinangwa ne Horizon Zero Dawn. Aya maficha nyowani anopa anovimbisa dhata yekuvandudzwa inosvika kusvika 15-20%. Muchiitiko cheRufu Stranding, iko kuvandudzwa kuri 10% uye pakati pe5 kusvika 10% yemamwe mazita emitambo yemavhidhiyo.
Uye zvakare, rutsigiro rwemazita rwakagadziridzwa. DirectX 12 uye mamwe akawanda akange atoenderana anozoona chiitiko ichivandudzwa Uye kana izvo zvikaita senge zvisina kukwana, kune mamwezve mashoko muVXD3D-Porton 2.4 senge:
Tsigiro yekushoma 3D machira akagoneswa.
Kugadziriswa kweBug muDXIL.
Yakagadziriswa isingazivikanwe bhagi uko zuva raipaza nemadziro muRE: Musha.
Cyberpunk kukanganisa 2077 uko dzimwe nzvimbo dzaitaridza dema chidzitiro hachichazooneka.
Humwe hutumbwe hwakanangana nekumhanya GravityMark hwakagadziriswawo.
Kusimba kupokana nezvimwe zvikumbiro zvekushandisa zvine hukama neNULL tsananguro zvinovandudzwa.
Mhinduro yeFP64 vector musiyano manejimendi kukanganisa muDXBC.
Cyberpunk 2077 yekuverenga skrini hairembedze iyo GPU muRADV.
Zvinetso mushanduro dzakasiyana dzeNecromunda zvakagadziriswa.
Zvimwe DIRT 5 zvinowedzera
Rumwe ruzivo nezve VXD3D-Proton 2.4 - Github saiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » VKD3D-Proton 2.4: kunze nekuvandudza mashandiro
Solus 4.3 inouya neLinux 5.13, desktop mamiriro ekugadzirisa uye nezvimwe